Abahlinzeki Bezilwane neFektri | China Animal Abenzi
Igundane Umsila SuperDirect PCR Kit
Leli thuluzi lisebenzisa uhlelo oluyingqayizivele lwe-lysis buffer ukukhipha ngokushesha i-genomic DNA kusuka kumasampula wegundane nezindlebe zegundane ekuphenduleni kwe-PCR, ngakho-ke ilungele ikakhulukazi ukuhlolwa okukhulu kofuzo.
Inqubo yokukhipha i-genomic DNA kusuka kusigaxa se-lysis isiqediwe kungakapheli imizuzu eyi-10-30 ekamelweni lokushisa (20-25 ° C). Akukho ukushisa okudingekayo, futhi ezinye izinqubo ezinjenge-protein ne-RNA ukususwa akudingeki. Inani elilandelwayo le-DNA lingasetshenziswa njengesifanekiso sokuphendula kwe-PCR.
I-2 × M-PCR Easy TM Mix inokubekezelelana okuqinile kuma-PCR reaction inhibitors, futhi ingasebenzisa i-lysate yesampula ezohlolwa njengesifanekiso sokukhulisa okusebenzayo futhi okuqondile. Le reagent iqukethe i-Foregene D-Taq DNAPolymerase, i-dNTPs, i-MgCl2, i-reaction buffer, i-PCR optimizer kanye ne-stabilizer.
Umsila weMouse oqondile we-PCR Kit-UNG
I-2 × M1-PCR Easy TM Mix (UNG) isebenzisa i-DUTP esikhundleni se-dTTP ngesisekelo se-2 × M1-PCR Easy TM Mix (UNG), futhi ingeza i-enzyme ye-UNG (i-Uracil-N-glycosylase) engehlisa isifanekiso esine-DUTP Ngisikhathi esifanayo. Ngaphambi kokuphendula kwe-PCR, i-enzyme ye-UNG isetshenziselwa ukwehlisa umkhiqizo we-PCR oqukethe i-uracil. I-enzyme ye-UNG ngeke ibe nomthelela kuthempulethi engenayo i-uracil, ngaleyo ndlela iqinisekise ukucaciswa nokunemba kokukhulisa nokuvimbela ukuthi kungenzeka ukuhlolwa okukhulu kofuzo. Ukungcoliswa kwemikhiqizo ye-PCR kwenzeke.
Leli thuluzi lisebenzisa uhlelo oluyingqayizivele lwe-lysis buffer ukukhipha ngokushesha i-genomic DNA kusuka kuma-zebrafish nakwezinye izicubu zezinhlanzi zasemanzini angenasawoti, amaphiko omsila noma amasampula amaqanda ezinhlanzi ekuphenduleni kwe-PCR, ngakho-ke kufaneleke kakhulu ukuhlolwa kwezakhi zofuzo ezinkulu. Inqubo yokukhipha i-genomic DNA kusuka kusigaxa se-lysis iphothulwe kungakapheli imizuzu eyi-10-30 ku-65 ° C. Azikho ezinye izinqubo ezifana namaprotheni nokususwa kwe-RNA okudingekayo, futhi umkhondo we-DNA okhishiwe ungasetshenziswa njengesifanekiso sokuphendula kwe-PCR.
I-2 × PCR Easy TM Mix inokubekezelelana okuqinile kuma-PCR reaction inhibitors, futhi ingasebenzisa i-lysate yesampula ezohlolwa njengesifanekiso sokukhulisa okusebenzayo futhi okuqondile. Le reagent iqukethe i-ForegeneD-Taq DNAPolymerase, i-dNTPs, i-MgCl2, i-reaction buffer, i-PCR optimizer kanye ne-stabilizer. Isetshenziswe ngokubambisana ne-lysis buffer ingathola amasampula ngokushesha futhi kalula, futhi inezici zokuzwela okuphezulu, ukucaciswa okuqinile nokuqina okuhle.
I-Zebra Fish Direct PCR Kit-UNG
I-2 × PCR Easy TM Mix (UNG) isebenzisa i-DUTP esikhundleni se-dTTP ngesisekelo se-2 × PCR Easy TM Mix, futhi ingeza i-enzyme ye-UNG (i-Uracil-N-glycosylase) engalulaza isifanekiso esine-DUTP ngasikhathi sinye. Ngaphambi kokuphendula kwe-PCR, i-enzyme ye-UNG isetshenziselwa ukwehlisa umkhiqizo we-PCR oqukethe i-uracil. I-enzyme ye-UNG ngeke ibe nomthelela kuthempulethi engenayo i-uracil, ngaleyo ndlela iqinisekise ukucaciswa nokunemba kokukhulisa nokuvimbela ukuthi kungenzeka ukuhlolwa okukhulu kofuzo. Ukungcoliswa kwemikhiqizo ye-PCR kwenzeke.